2010 को रूपमा निसान कम्पनी संसारको कार निर्माताहरु बीचमा आठौं सब। जापान, यो टोयोटा र होन्डा पछि तेस्रो रैंकों। साझा को 44.4 प्रतिशत फ्रान्सेली कम्पनी Renault SA (Renault) द्वारा स्वामित्व छन्। निसान डिसेम्बर 1933 मा स्थापित भएको थियो। सुरुमा, ब्रान्ड विकास गर्न निर्णय, "निसान" मई 1935 मा अपनाए थियो। तर, कम्पनी कार ब्रान्ड Datsun सामना थियो eighties को सुरुतिर पूर्व। प्रारम्भिक अर्द्धशतकको भएकोले निसान नै रकेट इन्जिन को उत्पादन मा पनि साबित, र त्यसपछि यो पनि जहाज निर्माण उद्योग को लागि इन्जिन भयो।
निसान Patrol 1951 देखि वर्तमान उपलब्ध छ। यसको विकास को पाठ्यक्रम, यो मोडेल धेरै पुस्ताका मार्फत गएको छ। 2010 मा सुरु, Y62 मोडेल प्रतिनिधित्व जुन छैटौं पुस्ता, मिसिन उत्पादन गर्छ।
यो शक्तिशाली मिसिन - निसान Patrol, विनिर्देशों, यसलाई निम्नानुसार छ। स्वतः शक्तिशाली आठ छ पेट्रोल इन्जिन को "युरो-4" अनुपालन जो 5.6 लिटर एक मात्रा, साथ। इन्जिन क्षमता चार अश्वशक्ति छ। को शहरी चक्र मा इन्धन खपत (मोड, शहरी सडक लागि विशिष्ट ड्राइभिङ गर्दा) प्रति सय किलोमिटर बीस लिटर छ, र देश र मिश्रित (को गति मोड, एक विशिष्ट उपनगरीय ड्राइभिङ मा) मा - मिसिन को यो वर्ग को लागि एघार चौध गर्न लिटर देखि, अपेक्षाकृत सानो छ । यो सबै-पाङ्ग्रा ड्राइव कार, र एक सात-गति स्वचालित प्रसारण छ।
यो निसान Patrol पूर्ण रूसी सडक र मौसम अवस्था मा सवारी छाँटकाँट छ उल्लेख गर्नुपर्छ। उहाँले शरीर र उन्नत निलम्बन, शक्तिशाली एसी र डीसी, बलियो सुरक्षा प्रबलित। यो रूसी इन्धन उत्कृष्ट काम गर्छ।
कार निसान Patrol उत्कृष्ट गति गुणहरू। यो प्रति घण्टा 100 किलोमिटर गर्न बढाउने गर्न सक्नुहुन्छ, 6.6 सेकेन्डमा प्रति घण्टा 210 किलोमिटर अधिकतम गति मा सार्न सक्नुहुन्छ। व्यास खोल्दै 12.8 मीटर छ।
मिसिन को ठूलो फाइदा एक प्रभावशाली उपस्थिति छ। निसान Patrol एक शक्तिशाली रुप हो। यस पक्षलाई कार मा अवतरण सुविधा कदम हो। छेउमा ऐनामा राति प्रयोगको लागि रोशनी माउन्ट। हेडलाइट्स कुहिरो छन्। विन्डोज पछिल्लो ढोका Tinted। छत सामान रेल, किलोग्राम अधिक एक भन्दा सय को वजन मा गणना मा स्थापित।
परिस्कृत सुरक्षा प्रणाली स्थापित छ त्यहाँ। विश्वसनीय ब्रेक लगान सिस्टम फरक आन्दोलन मोड मा सडक सतह संग सुधार वाहन कर्षण लागि प्रदान गर्दछ। त्यहाँ वास्तविक समयमा काम परिपत्र दृश्य को एक अद्भुत प्रणाली, चार क्यामेरा डाटा आधारमा सिर्जना छ। यी क्यामेरा डेटा को आधार मा माथिल्लो बिन्दुबाट अवलोकन द्वारा चित्रण गरिएको हुनत रूपमा सवारी साधनको वास्तविक स्थान, देखाइएको छ एक विशेष चालक प्रदर्शन गर्न। एक प्रणाली tiering आन्दोलन पनि हो। एक नम्बरको सीमा पार गर्दा involuntary, यो चालक पेश चेतावनी एक बीप।
को सानो घर मा चालक सीट साथै त्यहाँ तीन पङ्क्तिहरू मा प्रबन्ध छ थप सिट छन्। पङ्क्तिहरू बीच दूरी सान्त्वना एक अर्थमा लागि पर्याप्त छ। त्यहाँ कुर्सियों कोण समायोजन को एक प्रणाली छ।
अब वाहन को आराम कुरा गरौं। त्यहाँ हार्ड ड्राइभमा भनेर सङ्कलन सुन्न तपाईंसँग लिन अनुमति दिन्छ 9.3 जीबी को एक आकार भएको विशेष संगीत सर्भर संग सुसज्जित छ सांगीतिक काम। टाढाको नियन्त्रण चालक र प्रदर्शित कुर्सियों मा फिर्ता पक्ष headrests देखि सात इन्च मा आठ इन्च प्रदर्शन चलचित्र हेर्नका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
निसान Patrol 2012 अन्य मा विश्वसनीयता र एक हात मा कठिन अवस्थाको स्थिरता, र प्रविधिको एक उच्च स्तर प्रयोग संग संयुक्त सान्त्वना को एक उच्च स्तर, जोडती।
को अमानवचलित ट्याक्सी मा एक सवारी लिन चाहनुहुन्छ? अमेरिकी यात्रा
"टोयोटा क्राउन" (टोयोटा क्राउन): वर्णन, विनिर्देशों र समीक्षा
जाँचको लागि के आवश्यक छ?
Varfreym-hoaxer: उत्पादन देखि स्थापना गर्न
कसरी संस्करण 2.3 संग "एन्ड्रोइड" अद्यावधिक गर्न
मार्विन हैगलर: जीवनी, उचाई, वजन, फोटो, सबैभन्दा राम्रो झगडा
अभिनेत्री Kiele Sanchez: जीवनी, Filmography, व्यक्तिगत जीवन
कसरी कोइला मा चारकोल मा माछा तयार गर्ने
अणुहरु को Biogenic माइग्रेसन। परिसंचरण पदार्थ र विकास जीवमण्डल Name